China AD03 CBD / THC Banokubhala Vape Pen Nge Ngezantsi zitshajwe Port yoMvelisi yodongwe Ikhoyili Akukho Heavy Metal nge Taste Pure kunye Big Vapor mveliso kunye nabenzi | IAlphagreen vape
I-AD03 i-CBD / i-THC enokulahlwa kweVape pen eneZantsi yeCarl yoMvelisi weCeramic Akukho Simbi sinzima ngeTaste eQinisekileyo kunye neVapor enkulu
Inkcazo emfutshane: Sivelisa kwaye sinikezela nge-AD03 CBD / i-THC ipeni yokulahla i-vape, uyilo olufanelekileyo lwenkangeleko ye-vape izisa abathengi abaninzi rhoqo. Ukongeza, siye sasebenzisana nenkampani ye-cannabis enelayisensi iminyaka, egubungela uninzi lweentengiso zaseNyakatho Melika naseYurophu. Silindele ukuba liqabane lakho lexesha elide e-China.
Ixabiso le-F0B: I-US $ 1.85 - 2.0 / Isiqwenga
1. Ukuveliswa kweMveliso ye AD03CBD / iTHC Banokubulawa Vape Pen
I-AD03 i-CBD / i-THC ipeni ye-vape elahlwayo yenye yeepeni zethu ezithandwa kakhulu nezizinzileyo. Luhlobo oluncinci lokulahla ipeni yevape, kwaye yeyona nto ifana nepeni yokujonga icuba. Yenziwe ngetanki yeglasi yetamic tip, ubhedu obungenalothe, kunye nomgangatho ophakamileyo womqhaphu.
Nangona ubukhulu obukhulu bembobo yokungenisa ioyile yi-1.7mm, ubume obukhethekileyo benza inqanaba lokufunxa elikhulu. Sebenzisa ubungakanani obuncinci bokutya ioyile, kodwa ungavape ngokutyibilikayo.
Ibhetri esiyisebenzisayo ibhetri yebanga elinobungakanani be-350mAh, kwanele ukuvota ioyile enye yegramu, kuba ibhetri iyancitshiswa ngexesha lokugcina (Sihlola ibhetri nganye kunye nobudala bebhetri nganye ngaphambi kokuhambisa), ukuthintela le ngxaki, siyilele ukutshaja kwakhona izibuko emazantsi. Ke akuyomfuneko ukuba ukhathalele ingxaki yebhetri.
2. Ipharamitha yeMveliso (Ukucaciswa) kwefayile ye- AD03 CBD / iTHC Banokubulawa Vape Pen
I-CBD / i-THC ivape cartridge / i-AD03
Ubukhulu be-10.5mm & L 94.3 / 106mm
2 * 1.0mm / 1.5mm / 1.7mm, ubungakanani ngokwezifiso）
3. Uphawu Product kunye nokusetyenziswa AD03 CBD / iTHC Banokubulawa Vape Pen
Izinga lokufunxa eliphezulu, isuti yeoyile eshinyeneyo. (Umngxunya wokungenisa ioyile ngentando)
—Ngokuzibuyisela kwizibuko elitsha.
4. Iinkcukacha ngeProduct AD03 CBD / iTHC Banokubulawa Vape Pen
Inject Faka i-THC okanye i-oyile ye-CBD ngokulula, umthamo we-0.5ml kunye ne-1.0ml.
Akukho tyuwa inzima kwaphela.
Printing Ukuprinta ilogo yesiqhelo kunye nombala wengcebiso eyahlukileyo, yenza uphawu lwakho
Uhlobo lwe-Mini, i-1gram nje nge-106mm.
⑥ I-350mAh ibhetri enkulu yomthamo, eyaneleyo kwigrama enye.
Port Izibuko zeshaja emazantsi.
Egqithileyo I-AD01-2 i-CBD / i-THC enokulahlwa kweVape Pen yoMvelisi weCeramic Coil Akukho Msimbi unzima ngeTaste eQinisekileyo kunye neVapor enkulu
Okulandelayo: I-AD10 i-CBD / i-THC Pod enokulahlwa kweVape pen ngeZantsi yoMvelisi oCwangcisiweyo weCeramic Ikhoyili engenamandla ngeTaste eQinisekileyo kunye neVapor enkulu
CBD oyile vape ezilahlwayo
ipeni ye-cbd vape
yodongwe vape usiba
ezilahlwayo vape usiba
ipeni yevape egcwalisekayo
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, ipeni ye-cbd vape, ipeni ibhetri vape, ezilahlwayo vape usiba, 510 ibhetri, CBD oyile vape ezilahlwayo, ipeni yevape egcwalisekayo, Zonke iiMveliso